नवरसको १४ औं साधारणसभा: शिवहरी पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ समिति :: Sahakari Akhabar
नवरसको १४ औं साधारणसभा: शिवहरी पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ समिति
२०७८ मंसीर ६ गते , सोमवार Sahakari Akhabar
काठमाडौं । नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाका अवसरमा एसईईदेखि डाक्टर, ईन्जिनियरसम्म सम्मानित भएका छन् । डा. सरोज पन्त, डा. अनिता सापकोटा, ई सुरेश पन्त सम्मानित भएका छन् । गत वर्ष एसईईदेखि स्नाकोत्तर गरेकालाई संस्थाले सम्मान गरेको थियो ।
स्नातक गरेका दीक्षा श्रेष्ठ, सुलभ खत्री, सुजिता थपलिया, सञ्जय पाण्डे सम्मानित भएका छन् । एसईईमा सुमी थापा मगर, विशेष सुवेदी, रमण देसारलाई सम्मान गरिएको थियो । संस्थाले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा अम्बिका पौडेल र उत्कृष्ट कर्मचारीकारुपमा सुमन कोइराला, सुस्मिता पोखरेल, दीक्षा अमात्य सम्मानित गरेको छ ।
संस्थाले ज्येष्ठ सदस्य, मासिक बचत सदस्य र उत्कृष्ट व्यवसायी कारोबार सदस्यलाई सम्मान गरेको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक सरिता भट्टराई तिमल्सिनाले उत्कृष्ट कर्मचारी तथा सदस्यलाई सम्मान प्रदान गरेकी थिइन् ।
अध्यक्ष केशव कोइरालाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थाको सेयर पुँजी ३ करोड ६२ लाख ९१ ह्जार रहेको जानकारी दिए । संस्थाले २७ करोड ११ लाख ८३ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ बचत संकलन गरी २२ करोड ९६ लाख ७४ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जनाए । संस्थाले निर्वाचन सहितको साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो ।
सभाले शिवहरी पौडेलको अध्यक्षतामा ७ जनाको संचालक समिति तथा संगीता कक्षपतिको संयोजकत्वमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति चयन गरेको छ । समितिको अपाध्यक्षमा सुजता कुमारी श्रेष्ठ, सचिव उत्तम पुरुष दाहाल, कोषाध्यक्षमा रणजीत कुमार पोदार तथा सदस्यहरुमा उपेन्द्र बडाल, श्याम प्रसाद पन्त र कृष्ण बहादुर भटेटराई चयन गरेको छ भने लेखा समितिको सदस्यमा किशोर कुमार थापा र कृष्ण प्रसाद सुबेदीलाई चयन गरेको छ ।
चौथो ललितपुर साकोस समिट भोलिदेखिः मनोरञ्जनका साथै एकदर्जन कार्यपत्र प्रस्तुत हुने ...
२०७८ मंसीर ६ गते , सोमवार
सहकारी डेबिड कार्डको सुरु ...
ॐ साई नाग लक्ष्मी सहकारीको निर्वाचन सहितको साधारण सभा सम्पन्न ...
हाम्रो साकोसको २३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ...